Emnandi Kunazo Zonke-Korean (akukho plastic): izithombe
Muva nje, isithakazelo emhlabeni ezikhulayo movie isiKorea, uchungechunge TV nomculo bands. Sibé indlela entsha ukubheka bale isizwe, khulukhulu abomma kanye nabentazana, uyazibuza ukuthi isikhumba sabo sibukeka sisihle, kangakanani kukhanye izinwele zabo, njll Futhi-ke, thina unombuzo, ngubani izwe elihle kakhulu-Korean? Yiqiniso, lezi zimpendulo kungase kungabi esiyingqayizivele, ngoba wonke umuntu siqu imibono yabo ngalolu daba. Njengoba Bathi, akukho balandise akuthandayo, kodwa, nokho, abaningi baseNingizimu baseKorea uzokuphendula ukuthi ngowesifazane omuhle kunabo Korean emhlabeni - kuyinto umdlali waseshashalazini Iculo Hye-kyo. It is kuwo wonke umuntu ezaziwayo. Nanguya indlovukazi amaphupho ngamadoda. Yingakho le ntokazi nge ubuso emangalisayo ezikhangayo futhi sibalo kuleli zwe ngokuthi unkulunkulukazi ubuhle Korean.
Ukuphakama: 161 cm.
Isisindo: 44 kg.
Umbala izinwele: brown omnyama.
Iculo Hye-kyo wazalwa ngo 22/11/1981 endaweni yabadla izambane likaPondo kwedolobha Daegu emndenini oswele. Kodwa ezinye emithonjeni esohlwini kwenye idethi, okungukuthi Februwari 26, 1982 Iqiniso liwukuthi intombazane Yazalwa ngaphambi kwesikhathi futhi wachitha isikhathi eside esibhedlela, emnyangweni neonatology. Odokotela babengaqiniseki ukuthi ingane bayosinda, kodwa esenamandla futhi ukwazi ukubhekana nazo zonke izinkinga. Kuphela uma ukuphila kwakhe kwakusengozini, okungukuthi, ngemva kwezinyanga ezintathu usuku lokuzalwa, abazali banquma ukubhalisela kuzalwe indodakazi yakhe. Yiqiniso, injabulo yabo Kwakuyintokozo yodwa, * ngokuba waba kuphela ingane nomndeni wamukelekile. Abo ke babengabokulinga indlela ajabule ngayo ngokuchitha, uma sasazi ukuthi iminyaka engu-16 nendodakazi yabo uzothola isihloko "Emnandi Kunazo imodeli-Korean futhi." Ngokusho ET ngesikhathi sokuzalwa komuntu, ke Scorpion (bomdabu) kanye passport - Aquarius. Namuhla, osebenza nabo ukuhalalisela iNdodana lokuzalwa zasebusika lapho kungenakudla, uma sikubeka kahle, ke lokhu kumthukuthelisa kakhulu kangakanani. Kodwa inkanyezi - inkosikazi enhle kakhulu-Korean emhlabeni, izithombe zazo enikezwa esihlokweni - is agubha iholidi yayo okuzisholo ekupheleni kwekwindla.
Ngo-1984, ubaba wakhe wathola umsebenzi Daegu futhi umkhaya wathuthela edolobheni. Lapha, phambi intombazane ivula kungenzeka ukuthi esikhathini esizayo baletha intombazane ukuze imodeli umsebenzi nomlingisikazi. Konke lokhu ngabe akwenzekanga ukube wahlala kule ndawo.
Ngo-1996, izikrini out ifilimu-idrama "Langelihle". Kuyinto kulolu chungechunge wangenela Iculo Hye-kyo - enhle kakhulu-Korean. iminyaka engu-16, yena sasingakafiki kokuba zigcwalisekile. Naphezu kweqiniso lokuthi wayengeyena umlingiswa oyinhloko we chungechunge, ababukeli bukele i-TV kakhulu ukumbona. Ngawo lowo nyaka yena waba nengxenye onobuhle mncintiswano, futhi unqobe Grand Prix. Ngo-1997, ukuhlinzwa kokulungisa ukubukeka kwakungafanele athandwa kakhulu kuleli Korea, njengoba kunjalo namhlanje, ngakho amantombazane nge ubuso enhle okusaqanda nge ekhaleni kancane elimile nezindebe ngokugcwele, ngaphandle, ne mncane futhi nemilenze emide sibalo ezilinganiselwe e babembalwa kuleli zwe. Phakathi kwabo, Iculo Hye-kyo Beku amahle ngakho wakwazi ukunqoba. Yiqiniso, leli kwakungelona emncintiswaneni ubuhle, kodwa emva kokuba ukusakazwa show ku-TV bonke bavumelana ukuthi wayewukuphela enhle kakhulu-Korean. Photo kwalo kusukela luhlobise izembozo zomagazini, ukukhangisa amaphosta, namavidiyo ukungabuyeli kudlalwa kuzo zonke iziteshi ze-TV.
Iculo Hye-kyo - aktirsa
Nge ukuqala kwekhulu lama-21, ukuthandwa walo liye landa izikhathi eziningi, futhi ubuthongo isibe actress ethandwa kakhulu amadrama-Korean. Kwatholakala ukuthi owesifazane akanalo nje kakhulu idatha yangaphandle - ubuso amahle sibalo ephelele, kodwa futhi enesimo oyibamba ithalente. ukusebenza wakhe zazibonakala zinkulu ozwakalayo. Abantu abakwazanga ukuthatha amehlo akhe off izikrini TV. Okokuqala Wayedlala indima Heroine kule drama "Autumn Enhliziyweni Yami" (Autumn Enhliziyweni Yami), eyakhishwa ngo-2000. Kwakukhona ngokudubula ochungechungeni "Va-Bank" futhi "Full House." Babé bemthanda ababukeli babo bonke ubudala, futhi bonke ngenxa iqhaza Iculo Hye. Ngemva kwalokho, cishe wonke umuntu Korea wayekholelwa ukuthi le ntombazane - enhle kakhulu-Korean.
Ngo-2005, umqondisi isici ifilimu "Mina Girl wami" benquma ukumema ngokudutshulwa Umdwebo njengoba umlingisi losemcoka kuyinto Intandokazi izilaleli amadrama actress kanye imodeli Iculo Hye-kyo. Lokhu kungaba DEBUT yakhe ebhayisikobho. Nokho, akuzange kuphumelele, ngoba ngemva ukukhulula actress ifilimu ngokuphindiwe bagxekwa. kancane badumazeke, wathatha ikhefu emsebenzini yokudala, futhi wathuthela e-United States.
Ngemva kobana azinze e-San Francisco, waqala ukuya inkambo ulimi, ulandele umdlalo abadlali entshonalanga, ngamanye amazwi, ukuthuthukisa ulwazi lwabo kanye namakhono. AbaseMelika, owafunda kuso kusukela Korea, ngokushesha waqaphela ukuthi iphupho nakanjani enhle kunazo-Korean. Emlandweni eMpumalanga Ekude yezwe cishe akunakwenzeka ukuthola intombazane njengomthwalo ezikhangayo ngomqondo European efana Iculo Hye. Izinkulumo ezinjalo ngokumelene nalo, yebo, uphefumulela actress abasha kwagxilisa yakhe ngethemba lokuthi, ngemva esebuyele ekhaya, njengoba ekwazi ukubamba ngaphambili. Ngaphezu kwalokho, kungcono kakhulu ukubuyeka ngithuthukise isiNgisi sami, futhi lokho kwakufanele sisebenze inzuzo yakhe enkulu.
Ngo-2007, wabuyela Korea futhi ngokushesha ababemenyelwe ukudubula izithombe Hwang Jin Yi. Kulokhu konke kwahamba kahle, futhi kinoeksperty wathatha umsebenzi wakhe kunjalo akukho ukugxekwa. Ngo-2008, it wathola ithuba inkanyezi kwenye idrama ngokuthi "Lonke izwe abahlala kulo." Ezinyangeni ezimbalwa kamuva kuyinto enhle kunazo actress isiKorea, wamenywa ngomunye Hollywood studios ukudubula izithombe "Fetish". Ngokwemvelo, kwaba ezingeni ehluke ngokuphelele, futhi sibonga lesi sithombe, simo yakhe yavuka ngendlela embi engakaze yenziwe Korea. Ngemva kwalokho, i-umqondisi wamabhayisikobho waseMelika ngokuphindaphindiwe bammemela inkanyezi kumafilimu ezifana Camellia: Busan Project (2010), futhi "Isizathu ukuphila (namuhla)." "Grand Master" Ngo-2013, yena waphathiswa indima unkosikazi Ip Man e-movie.
Ngo-2013, eneminyaka engu-31 ubudala Gen Iculo Hye ekugcineni emuva ezikrinini TV. Wanikwa indima abaholayo kwelinye amadrama ethandwa kakhulu kuleli zwe - Lowo Winter, The Wind Blows. Naphezu kweqiniso lokuthi namuhla e-Korea, nsuku zonke kukhona inani elikhulayo amantombazane amahle izici eyinkimbinkimbi (zonke ngenxa nommese udokotela ohlinzayo sika), Iculo Hye Genesise, mayelana nokuthi zinengi, kusenzima - inkosikazi enhle kakhulu-Korean ngaphandle Plastics. A ubuhle bemvelo kulelizwe namuhla siyindlala. Ngaphezu kwalokho, eziningi amantombazane ephendukela odokotela abahlinzayo plastic, ucelwa ukuba wenze kubo ibukeke Iculo Hye Gen. Ubuso bakhe bekulokhu ezikrinini TV. Kuyinto ethandwa kakhulu njengesibonelo nomlingisikazi izimakethe. brand eziningi ezivela emhlabeni wonke wamcela ukuba sibe ubuso inkampani yabo. Nazi ezinye zazo: Laneige, Etude kaLevi Lady Style, Nintendo DS Animal Crossing Whitea, Aritaum, Roem, Innisfree FHM, McDonalds Ice Cream. Futhi ngo-2011 eneminyaka engu-okokuqala emlandweni Korea usayine isivumelwano ne ukumodeliswa ejensi ashisa imifanekiso (France). Sekuvele zithuthukisa eziphethe imakethe yomhlaba wonke-ke.
Ngo-2011, unyaka i-wamashumi amathathu Iculo Hye Gen isithombe wakhipha ngokuthi Moment song hye kyo sika. Kube yashicilelwa izithombe zakhe kuthathwe udumo izithombe kanye isithombe ezithakazelisayo emazweni ahlukahlukene futhi amadolobha: Atlanta, e-New York, Buenos Aires, Patagonia, Paris, Netherlands nase Brazil. Ngo-2012 yena eshicilelwe kwenye incwadi - umbiko isithombe "Heh Gay Isikhathi".
Ngo-2010, imodeli 29 ubudala nomlingisikazi Iculo Hye Fe usezuze yenanelwa umhlaba wonke, ngokufaka uhlu "100 osaziwayo enhle kakhulu 2010", esanyatheliswa yi-American Abagxeki Independent. Ngemva konyaka, wayeshaye phansi yesihlanu ku simo TC Candler, ihlanganiswe ngochwepheshe abazimele. Kafushane, iphupho - hhayi nje owesifazane Korean amahle kakhulu emhlabeni, kodwa futhi omunye nabesifazane abahle kakhulu kule planethi. Ngesikhathi esifanayo, labo baba nethuba ukuxhumana naye, bakholelwa ukuthi kuyinto enhle kokubili ngaphandle futhi ngaphakathi. Ngo-2001, yena yabizwa ngokuthi "Kuhle-Korean Star", futhi ngo-2003 - the "actress best konyaka", okuwunyaka wafumana isihloko "inkanyezi abasha konyaka" (2003), ngemva kweminyaka emibili won ukuqokwa "Lo mlingisi ethandwa kakhulu yaseNingizimu Korea. "
Ngo-2003, ngesikhathi owesifazane, omuhle Korean - iphupho amadoda amaningi - ukusungula ukuthandana nomunye uzakwabo kunoma yiziphi Lee Byung-Hon. Nokho, ubuhlobo babo ngokushesha waphela futhi wanquma neze ukuthi liphazamisane ubuhlobo professional ne siqu. Kodwa ngemva kweminyaka embalwa ayenakho nokwephula zokusebenzisa lesi simiso. Lokhu kwenzeka lapho ku isethi kakhulu uchungechunge oluthi "izwe abahlala kulo," Ngakho wahlangana Hon Bina, futhi ngemva konyaka benza lokuhlonishwa phambili ekukhulumeni kwabezindaba, ukuthi bayathandana. Ngesikhathi esifanayo abantu abasha ungafuni kwaziwe ubuhlobo babo futhi akuvamile uvele ndawonye umphakathi. Nokho, lapho ngo-2011, unyaka Hon Bina wabuthelwa, lo mbhangqwana behlukana. Ngemva kwalokho, amahemuhemu zomphakathi amanoveli Lala nabanye-Korean abaculi amadrama, kodwa washesha ukunqabela lezi inzwabethi.
Amaqiniso ethakazelisayo ubuhle lokuqala Korea
Lapho Iculo Hye akwehli kahle, uqala bhala ekhaleni lakhe.
It has no izinkolelo ezithile zenkolo. Nokho, ezizwa priverzhenka Buddhism, futhi ngezinye izikhathi - Catholicism.
Ngo Iculo Hye Gen amabili ezinsuku - Novemba 28 no-Febhuwari 26.
Lo mlingisi ine isikhundla asebenzayo zenhlalo: ngo-2009 wamiswa inxusa ukuze kuvikeleke izithakazelo panda giant imithini e-Asia.
Ngiseyingane iphupho eyingoduso kwezemidlalo ezifana sibalo ukushushuluza, ukubhukuda umgijimo.
Lo mlingisi has a imfundo zomculo (upiyano).
Imfundo ephakeme azithola e-University of Xie Chen.
Ngaphandle izithombe namavidiyo amakhamera Iculo Hye-kyo onesizotha kakhulu, omunye angase athi ngisho ntombazanyana enamahloni.
Ukuze indima e ifilimu "I Grandmaster" wafunda kafushane Cantonese karate.
Main umdlalo Dream - travel kanye yezitolo, futhi iqoqa amakha.
iqembu engiyithandayo zomculo Gen Iculo Hye - Big Bang, Nokho, kuyaqapheleka ukuthi lalingakaze liye amakhonsathi abo.
Le ntombazane has a isiteketiso: Woodpecker (Woodpecker).
Manje uyazi ukuthi ubani ubuhle ezikhanga kakhulu Korea, ngaphandle ukuhlinzwa isikhumba.
Psychic Kazhetta: izimfihlo biography wakhe kanye nempilo yakho
Udokotela American Dzhek Kevorkyan kuJakobe: Biography, izimpumelelo amaqiniso athakazelisayo
Umklami Krivda Artem: Biography, imisebenzi kanye amaqiniso athakazelisayo
UNikolai Valuev: ubude nesisindo
Biography Miroslava Karpovich: ebuntwaneni, umsebenzi, impilo siqu
UNikolai Bulgakov nomndeni legend uhlobo
Ukufaka umsakazo. Ingabe kulula kangaka?
Indlela ukubeka umntwana ukulala eminyakeni 2: amathiphu, iseluleko
Ukuhlaziywa kokuqukethwe umbhalo. Indlela futhi Incazelo
Semali phezu kwezinsini, izimbangela kanye nemiphumela.
Cream ikhekhe "Caramel" nezinye amaswidi okuzenzela esekelwe caramel
Isifo womuntu Heritable. Uhlu. Izifo ezivame kakhulu futhi iyingozi
10 amaqiniso okuphila, okuyinto abatshelwa inganekwane
Ukukhiqiza ukuqedwa kwenkontileka unilaterally, kufanele bazazi ezinye izinto
Petunias umquba - isicelo